उमेर अनुसार कुन उमेरमा के खाने ? «
उमेर अनुसार कुन उमेरमा के खाने ?
प्रकाशित मिति : ६ असार २०७८, आईतवार १५:५७
हाम्रो उमेर बढ्छ, तर हाम्रो खानपानको व्यवहार परिवर्तन हु“दैन । त्यही परौंठा र पुरी जुन हामी २० वर्षको उमेरमा खान्छौं, ४० मा पनि त्यही खान्छौं र ६० मा पनि ।
परिणाम हामी बिरामी हुन्छौं र कतिपय शारीरिक एवं मानसिक समस्याले सताउ“छ । उमेरको वृद्धिस“गै पाचन क्षमता घट्दै जान्छ र गरिष्ठ भोजन पचाउन कठिन हुन्छ ।
डाइटिसियनहरूका अनुसार ३० वर्षपछि मेटाबोलिज्म घट्दै जाने हु“दा डाइटमा पर्याप्त पोषकतत्व हुनुपर्छ । डाइटमा ५ पोर्सन्स फल र तरकारी हुनुपर्छ ।
यो उमेरमा एनर्जी र प्रोटिनको आवश्यकता कम हुन्छ । यो उमेरमा २० वा ३० को उमेरको जस्तो डाइट उपयुक्त हु“दैन । टेस्ट बड्स कम हुनु र उमेर बढ्नुका कारण भोक पनि कम लाग्छ अनि तौल पनि कम हुन्छ । यस्तोमा मोनोअनसेचुरेटेड फ्याट लिनुपर्छ ।
आलुलाई उसिनेर मुछेपछि त्यसमा ओलिभ ओयल मिसाएर खानुपर्छ । यसले एनर्जी प्रदान गर्छ । दूध तथा दूधबाट बनेका परिकार पनि खान सकिन्छ । यो उमेरमा रोगप्रतिरोधक शक्ति कम हुन्छ तसर्थ सूप र सलादको मात्रा बढाउनुपर्छ ।
यो पचाउउन सहज हुनुका साथै एन्टी अक्सिडेट्सयुक्त समेत हुन्छ । यतिबेला पाचनसम्बन्धी समस्या पनि बढ्छ, जसबाट कब्जियत तथा पाइल्स हुन्छ । अतः फाइबरयुक्त आहारका साथ प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ ।
अमेरिकाले उल्ट्यायो गर्भपतन सम्बन्धी पाँच दशक पुरानो कानुन
अमेरिकी उच्च अदालतले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने पाँच दशक पुरानो फैसलालाई उल्टाइदिएको छ । अमेरिकी